Maalgelinta $ 200k Dakhliga 2021: 10 Xulashada ugu Fiican Hantida
Bogga ugu weyn Maalgelinta $ 200k Dakhliga 2022: 10 Xulashada ugu Fiican Hantida
Ma haysaa $200k oo ma ka yaabtay inaad dakhli u geliso? Waxaan kuu adeegi doonaa hagaha basbaaska leh ee ku saabsan fursadaha ugu fiican ee lagu maal gashado. Asal ahaan, sida kaliya ee aad dakhli badan ku heli karto waa samaynta maalgashi badan oo faa'iido leh, sax?
Tallaabada geesinimada leh ee aad ku maalgelinayso lacag aad u badan waxay noqon kartaa marinka leexashada ee noloshaadu u baahan tahay inaad ku dhaqaaqdo sida ugu wanaagsan.
Marka, halka kuwa kale doorbidaan inay ku dhegaan shaqadooda 9-5, waxaad ka faa'iidaysan kartaa inta ugu badan $ 200k adiga oo maalgashanaya.
Eeg waxa maqaalkani leeyahay adigoo akhrinaya;
Maxaan U Baahanahay Inaan Ogaado Kahor Maalgelinta?
Waxaa jira waxyaabo badan oo aad ogaan karto ka hor intaadan qaadin tallaabadaas oo ku samayn karta ama ku kharribi karta maaddaama ay jiraan maalgashiyo badan oo jira.
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad barato midka adiga kuu fiican oo aad raacdo laakiin marka hore; talo dhaqaale raadso.
Markaad raadinayso talo dhaqaale, waa muhiim inaad hesho lataliye dhaqaale oo khabiir ah.
Doorka lataliyayaasha maaliyadeed lama soo koobi karo. Waxay fahmaan waxa ay yihiin xaaladaha suuqyadu waxayna ku siinayaan ROI gaar ah oo maalgashi gaar ahi soo saari karo.
Sidoo kale, lataliyaha maaliyadeed ee og basalkiisa ayaa awood u leh inuu barto duruufaha ku xeeran dhaqaalahaaga ka dibna, wuxuu kuu soo jeedinayaa midka ugu fiican ee ay tahay inaad maal gashato si aad dakhli u hesho.
Maya! la tashigu bilaash maaha laakiin waxaad igu kalsoon tahay in waxa aad bixin doonto ay kuu dhaafi doonto calaamad muujinaysa waxa taladaas qiimaha badan kugu kacaya.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: Badbaadinta vs Maalgelinta: Goorta la dooranayo & sida loo Sameeyo
Maxay yihiin Ikhtiyaarada ugu Fiican ee aan ku Maalgalin karo $ 200k?
Kuwani waa siyaabaha ugu wanaagsan ee aad ugu maalgelin karto $ 200k dakhli dheeraad ah. Laakiin, eeg tixgelinta ay tahay inaad samayso; yoolka da'da iyo maalgashiga.
La -taliye maaliyadeed ayaa ku weydiin doona inaad u kala qaybiso lacagtan baddan dhowr baaldiyo maal -gelin si aad u kordhiso kartidaada kasbashada.
U fiirso xulashooyinka ugu wanaagsan ee maalgashi ee aad waligaa yeelan karto.
#1. Maalgeli Hantida Ma -guurtada ah
Tani waa fursad maalgashi oo faa'iido badan leh oo aad qaadan karto gaar ahaan haddii aanad heli doonin maalgalintaada had iyo jeer.
Waxaad u qoondeyn kartaa 10-15% ee $ 200k-gaaga ah oo aad iibsan kartaa guryaha inta aad u oggolaanayso bixinta kireystayaashaadu inay kuu noqoto il dakhli dadban.
Sidoo kale hantida ma-guurtada ah, waxaad ku maal-gashan kartaa qaar ka mid ah Hanti-dhowrka Maal-gashiga Hantida Ma-guurtada ah halkaas oo aad ka hesho xoogaa dakhli ah oo ka soo baxa hantida ma-guurtada ah adoon samaynin shaqada mulkiilaha.
Hantida ma guurtada ah, waxaad ku samayn kartaa mid ka mid ah kuwan;
Guri iibso oo hagaaji
Iibso oo hayso guryaha kirada ah.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: Waa maxay Maalgelinta Mawduuca? Sida ay u Shaqeyso, Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka
#2. Suuqa saamiyada
Halkan, waxaad ku qoondayn kartaa qiyaastii 40-50% lacagta aad haysato oo aad ku maalgashan karto dakhli waxay dedejineysaa kaydintaada hawlgabka si dhab ah.
Adiga oo gacan ka helaya koonto dilaalnimo, waxaad si fudud u maalgashan kartaa tiro kayd ah.
Haddii kale, waxaad noqon kartaa maal-geliye naftaada samee laakiin inta aysan taasi dhicin; waa inaad barataa aasaaska suuqgeynta saamiyada iyo laga yaabee inaad hesho lataliye Robo-ku-tiirsanaan ah.
#3. Shahaadada Debaajiga
Hab kale oo laguugu soo saari karo dakhli dadban waa adiga oo 200k ku maalgeliya dakhli shahaado dhigaal. Tani waa haddii aadan si degdeg ah ugu baahnayn lacagtaada 6 -da bilood ee soo socota.
Kadib, waxaad heli kartaa dulsaar ka fiican kan koontadaada jeeggu ku siin doonto.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira laba arrimood oo ay tahay inaad tixgeliso. Waxay kala yihiin;
Heerka dulsaarka: Tani waxay kaa caawineysaa inay ku siiso aragti wanaagsan oo ku saabsan sida ay yihiin dulsaarka dulsaarka sidaa darteed waxaad u badan tahay inaad ogaato sida haddii aad u degi doonto midkood maalgashiga muddada-gaaban ama muddada-dheer.
Waqtiga: Xisaabinta maskaxeed ee muddada aad joogi karto la'aanteed $ 200k ee aad maalgashatay adigaa iska leh. Maskaxda ku hay in inta aad maalgelin ku samayso shahaadada dhigaalka, ay sii badanayaan afkaaga-dantaadu.
Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah noocyada caanka ah ee shahaadooyinka deebaajiga ee aad maalgashan karto. Dooro midka kugu habboon.
Shahaadada Deposit-ka ee Booska.
Shahaadada dareeraha ee dhigaalka: Halkan, waxaad ka bixin kartaa lacagtaada mana bixin kartid ciqaab. Si kastaba ha ahaatee, dulsaarka dulsaarka maalgashigan ayaa aad u liita.
Shahaadada Kor-u-qaadka ee Shahaadada Debaajiga.
Shahaadada Deposit ee Jumbo: Tani waxay u baahan tahay dheelitir sare oo ugu yaraan ah, $ 100. waxayna la timaadaa dulsaar sare.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: Sida Loo Bilaabo Maalgelinta Lacagta Markii Ugu Horreysay
#4. Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrency'
Maalgelinta cryptocurrency waa dariiq loo maro laakiin maaha mid loogu talagalay kuwa qalbi jabay. Waxay ku shaqeysaa tignoolajiyada blockchain iyada oo aysan jirin wax taageero ah oo dowladeed. Sidaa darteed, aad bay khatar u tahay.
Waxaa jira dhowr lacagood oo dhijitaal ah oo leh qiimayaal suuq geyn kara oo aad kaga ganacsan karto sarrifka crypto.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in ay jiraan waqtiyo hoos u dhac ku jira adduunka crypto.
#5. Miisaaniyada Ganacsi ee Is -dhaafsiga iyo Is -weydaarsiga
Kani waa isku -duwayaasha maal -gashadayaasha oo dhigaya dhawr jajab oo dhigaal ah si loogu maal -geliyo liiska wax -qabadyada.
Maamulaha maaliyaddu waxa uu arkaa fursad mudan in la maalgeliyo oo uu la qabsado xooggiisa oo dhan.
Khataraha ku jira maalgashiga noocaan ah waxaa la wadaaga maalgashadayaasha si ka duwan midda ay tahay inaad keligaa halis u qaadato.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: Maalgelinta Hantida Guryaha ee 15 ee Bilowgayaasha 2022
#6. Amaahda Dacawada
Tani waxay sidoo kale u adeegi kartaa sidii ikhtiyaar kale oo ku saabsan sida loo maalgeliyo $200k ee 2021.
Waxaad qaadici kartaa istiraatiijiyadda bangiga ee deyn siinta lacagtaada si aad u hesho fursad aad ku kasbato dakhli badan si aad macaash ugu hesho.
Lacagta ku dhig amaah bixiye isku faca ah kaas oo ku celin doona nidaamka bangiga oo ku siin doona qadar macquul ah faa'iidadaada.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: Sida Loo Maalgashado: Hagaha Bilowga ah ee Maalgelinta Suuqa Suuqa 2022
# 7. Xisaabta Kaydka
In kasta oo ay jiraan fursado badan oo maalgashi, waxaad dooran kartaa inaadan ku khamaarin lacagtaada. Sidaa darteed, miciinka si loogu keydiyo koonto caadi ah.
Inta badan, dulsaarka dulsaarku waa wax lagu qoslo si aad dhab ahaan u kasban karto dakhli badan adiga oo xidha muddo cayiman.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: Waa Maxay Maalgashiga Kobaca Dakhliga? | Tilmaam Buuxa Oo Ku Saabsan Hantida Weyn
#8. Maalgeli Dillaalnimada Adeeg-buuxa ah
Dillaaliyeyaasha adeegga buuxa waxay guud ahaan bixiyaan xulashooyinka faylalka oo dhan oo aad awoodid inaad naftaada uga faa'iideysato qiimo dhimis.
Si kastaba ha ahaatee, farqiga aasaasiga ah ee u dhexeeya dhammaan dallaaliyeyaasha adeegga ayaa dhab ahaantii ah inay kuu abaabulaan faylalka ugu fiican adiga.
Waxaa laga yaabaa inay daryeelaan dhammaan hababka maalgelinta ee adiga, inkastoo tani ay dib kuugu soo celin doonto marka la barbardhigo wax badan marka la barbar dhigo dullaal qiimo dhimis ah. Qadarka caadiga ah waxaa la bixiyaa si loola tacaalo faylalka hal mar kaliya.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: Waa maxay Maalgelinta Aaminaada? Dulmar, Iyo Sida Ay U Shaqeyso
#9 Maal geli Dahabka
Dad badan oo khubaro ah ayaa u malaynaya in maalgashiga dahabka oo ay weheliyaan biraha kale ee qaaliga ah runtii waa lama huraan, sababta oo ah xulashooyinkani waxay bixiyaan xayndaab ka dhan ah sicir -bararka.
Waxaad ku bilaabi kartaa adiga oo helaya fursado badan oo kuu oggolaanaya inaad maal gashato dahabka jirka.
Way kuu fiican tahay had iyo jeer inaad ka welwelsan tahay degganaansho la'aanta suuqa. Maalgashadayaasha doonaya inay iibsadaan badeecooyin qiimo leh oo taagnaa waqtiga waa inay sidoo kale ka fekeraan dahabka.
#10. Hore u sii Qorshee si aad u hesho Nolol Wanaagsan
Tani waa go'aanka ugu fiican ee aad waligaa qaadan karto qof ahaan. Tani waa sababta oo ah, marka laga reebo xulashooyinka kor ku xusan ee dakhli badan, waxaa jira waxyaabo kale oo aad sameyn karto si aad ugu noolaato nolol wanaagsan.
Waxay kala yihiin;
Bixi qaar ka mid ah deymaha lagugu leeyahay
Iibso caymis si aad u ilaaliso hantidaada iyo;
AKHRI WAX DHEERAAD AH: Waa maxay sababta ay tahay inaad uga fiirsato Maalgelinta Guryaha Fog ee fog?
Iyadoo la tixgelinayo da'daada iyo yoolalkaaga, $ 200k waa lacag aad u badan haddii aad si caqli-gal ah u maalgashan karto laakiin si dhakhso ah ayaad hoos ugu dhigi kartaa qulqulka haddii aad ku guuldareysato inaad qaadato go'aan caqli-gal ah.
Hubi inaad ku lug leedahay dadka saxda ah ee kugu haga hannaanka maalgashiga waxaadna ku farxi doontaa halka aad isku aragto dhawr sano ka dib.
La soco mid kasta oo ka mid ah ikhtiyaarrada oo maal geli lacagtaada si aad u sugto mustaqbalka maaliyadeed ee aan walwalka lahayn adiga iyo qoyskaagaba.
Sida Loo Iibsado Saamiyada 2021
Socdaalkaaga waxbarasho iyo aqoon dheeraad ah oo ku saabsan maalgashiga iyo amniga maaliyadeed, waxaad la kulmi doontaa ereyga…
Maqaalkani wuxuu noqon doonaa mid kooban oo dabooli doona kaliya fikradda shirkadaha maaraynta hantida. nala joog. Waa maxay…
Haddii aad rabto in aad bilowdo ka mid noqoshada maalgashiga nolol maalmeedkaaga iyada oo inteeda badan si toos ah loo sameeyo…
Sida Looga Iibsado IPO Stock qiimihiisii ​​ugu horeeyay 2021
Iibsashada saamiyada IPO ayaa had iyo jeer ahaa mid faa'iido leh, iyada oo celceliska soo celinta sanadlaha ah ee ku saabsan 10%. Laakiin maxaa dhacaya haddii…